स्वास्थ्य जिवनशैली Archives - itaharinews
कोभिड–१९ को कारक कोरोना भाइरस संक्रमणले हाल विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको छ । विश्वभर अहिलेसम्म चार लाख २४ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् र मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजार ९३१ भन्दा बढी पुगेको छ । मुख्यतः कोरोना भाइरस व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने गर्छ । कुनै संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छ्यूँ गर्दा उनीहरुको शरीरबाट निस्कने कफ वा ओसिला छिटाहरुमा भाइरसहरु हुन्छन् । नजिकै रहेको स्वस्थ्य ...
काठमाडौँ /सरकारले कोरोना संक्रमणलाई ध्यान दिँदै फलोअप, निर्धारित शल्यक्रिया र होलबडीको स्वास्थ जाँच दुई साताका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यी तीन कार्य बन्द गर्दा कोरोना रोकथाम हुने विश्वास गरिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले शल्यक्रिया रोक्दा आइसियु खाली हुने र त्यो कोरोनाका बिरामीका लागि उपयोगी हुने बताए। आइसियु वेडको व्यवस्थापन गर्न नसकेको आर...
एजेन्सी ‘एन एप्पल अ डे कीप्स द डाक्टर अवे’ अर्थात हरेक दिन एउटा स्याउ खानुस्, डाक्टरलाई टाढा राख्नुस् । स्याउको अनेकन् फाइदा हुँदाहुँदै कम मात्र मानिसले नियमित स्याउ खाने गर्छन् । तर नियमित स्याउ खाँदा थुप्रै फाइदाहरु हुने गर्छ । एक अध्ययनका अनुसार एउटा स्याउमा भारी मात्रामा फ्लेवोनोइड्स पाइन्छ । फ्लेवोनोइड्सले शरीरका एक मात्र होइन थुप्रै समस्याहरुबाट बचाउँछ । हरेक दिन एउटा स्याउ खाँदा स्या...
दलहन वनस्पतिमा पर्ने बदाम जाडो मौसममा अधिकांशले खान रुचाउने गर्दछन् । जाडोयाममा घाममा बसेर बदाम खानु निकै आनन्दमयी हुन्छ । बदाम खानु स्वादका हिसाबले त मीठो हुन्छ नै साथै मानव स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ । जाडो मौसममा खाइने बदामका फाइदाहरु निम्नानुसार छन् स् १. तौल घटाउन बदाम खाँदा थोरै मात्राले पनि पेट भरिएको महशुस हुने भएकाले अन्य क्यालोरियुक्त चिल्लो पर्दाथ भएको खानेकुरा खाने ...
एजेन्सी : हिन्दूधर्मको वेदहरुका अनुसार हात सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो । यस्तै हातका प्रत्येक औँला पाँच तत्वको विस्तार हो । बुढी औँलाले अन्तरिक्षलाई बुझाउँछ । त्यस्तै चोर औँलाको साथ हावा ९वायु० जोडिनेछ । माइली औँला ९मध्य औँला० ले अग्नीलाई जनाउने छ । साइली औँलाले शुद्ध पानीलाई जनाउँने छ भने कान्छी औँलाले पृथ्वीको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसैले हातले खाना खाँदा यी पाँच तत्व उत्तेजित हुने गर्दछ । यस...
मांसपेशी मजबूत बनाउनका लागि पोषणयुक्त खाना खानुपर्दछ। खानपानमा राम्ररी ध्यान दिएमा मांसपेशी मजबूत हुनुका साथै शरीर आन्तरिक रुपमा समेत बलियो बन्छ । मांसपेशी मजबूत भयो भने मानिस निरोगी मात्र होइन त्यत्तिकै आकर्षक पनि बन्छ । तसर्थ मांसपेशी बलियो बनाउन यस्ता खाने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ : गोलभेंडा: गोलभेंडामा लाइकोपीन नामक पदार्थको मात्रा धेरै हुन्छ। लाइकोपीन बिरुवामा पाइने एक प्राकृतिक रासायनिक पद...
ल्वाङमा युजेनल नामक तत्व हुन्छ, जसले धेरै प्रकारका स्वास्थ्यसम्बन्धि समस्याबाट मुक्त हुन मद्दत गर्छ । ल्वाङको असर तातो हुने भएकाले चिसो वा रुघाखोकी लागेमा पानीमा उमालेर पिउँनाले फाइदा गर्छ । जान्नुहोस्, ल्वाङका यस्ता १० फाइदाहरु : 1. एसिडिटी – ल्वाङ खाने गर्नाले मुखमा ‘सेलाइवा’ बढी उत्पादन हुन्छ, जसले खानालाई राम्ररी पचाउन सघाउँछ र पेटमा एसिडिटीको समस्या हुँदैन । 2. मुटुको समस्या – दिनमा एउटै मा...
अण्डाका पत्याउनै नसकिने यस्ता छन् फाइदाहरु !
काठमाडौं । अण्डालाई पौष्टिक आहारको रुपमा लिइन्छ । अण्डाले बलियो बनाउँछ र उचाईमा वृद्धि गरिदिन्छ भन्ने आम धारणा छ । यहाँ अण्डाका पत्याउनै नसकिने फाइदाको बारेमा चर्चा गरिएको छ । 1. अण्डाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि गरिदिन्छ । 2. अण्डा सेवनले कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । 3. नियमित अण्डा सेवनले मुटु रोग लाग्ने खतरा कम हुन्छ । 4. अण्डामा भिटामिन हुने हुँदा यसले छाला, कपाल र नङलाई राम...
आज भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै !
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक १४ र १५ गते छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउने भएको छ । भिटामिन ए कार्यक्रम सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रमभित्र पर्दछ । परिवार कल्याण महाशाखाका पोषण प्रमुख केदार पराजुलीले सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्र्तगत बुधबार र बिहीबार भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाइने जानकारी दिए। बुधबार भिटामिन ए र जुकाको औषधि खान छु...
बिहान बिउँझिनासाथ ओछ्यान नछोड्नुहोस्, अप्नाउनुहोस् यी तरिका !
एजेन्सी। कैयौ व्यक्तिहरु बिहान बिउँझिनासाथ एकैपटक विस्तरा छोड्छन् । यसले मुटुमा नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। आयुर्वेदमा बिहान उठ्ने सही तरिका बताइएको छ । यसलाई उपयोग गरेर शरीरलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ । बिहान निद्रा खुलेपछि दाहिनेपट्टि फर्किनुहोस् । अनि उठेर बस्नुहोस् । यसले मुटुमा अनावश्यक दबाब पर्न पाउँदैन किनकि मुटु हाम्रो शरीरको बायाँतर्फ हुन्छ । अब दुवै हात माथि उठाएर तन्काउनुस् । यसले रातमा कम भ...